FlavorCoin စျေး - အွန်လိုင်း FLVR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FlavorCoin (FLVR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FlavorCoin (FLVR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FlavorCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FlavorCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FlavorCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FlavorCoinFLVR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00006FlavorCoinFLVR သို့ ယူရိုEUR€0.00005FlavorCoinFLVR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00005FlavorCoinFLVR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00006FlavorCoinFLVR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000578FlavorCoinFLVR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000405FlavorCoinFLVR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00142FlavorCoinFLVR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000239FlavorCoinFLVR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00009FlavorCoinFLVR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00009FlavorCoinFLVR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00144FlavorCoinFLVR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0005FlavorCoinFLVR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000342FlavorCoinFLVR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00483FlavorCoinFLVR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0108FlavorCoinFLVR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00009FlavorCoinFLVR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0001FlavorCoinFLVR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.002FlavorCoinFLVR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000447FlavorCoinFLVR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.00681FlavorCoinFLVR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0765FlavorCoinFLVR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0249FlavorCoinFLVR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0047FlavorCoinFLVR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00178
FlavorCoinFLVR သို့ BitcoinBTC0.000000006 FlavorCoinFLVR သို့ EthereumETH0.0000002 FlavorCoinFLVR သို့ LitecoinLTC0.000001 FlavorCoinFLVR သို့ DigitalCashDASH0.0000007 FlavorCoinFLVR သို့ MoneroXMR0.0000007 FlavorCoinFLVR သို့ NxtNXT0.00516 FlavorCoinFLVR သို့ Ethereum ClassicETC0.000009 FlavorCoinFLVR သို့ DogecoinDOGE0.0184 FlavorCoinFLVR သို့ ZCashZEC0.0000007 FlavorCoinFLVR သို့ BitsharesBTS0.00245 FlavorCoinFLVR သို့ DigiByteDGB0.00249 FlavorCoinFLVR သို့ RippleXRP0.000211 FlavorCoinFLVR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000002 FlavorCoinFLVR သို့ PeerCoinPPC0.000216 FlavorCoinFLVR သို့ CraigsCoinCRAIG0.0291 FlavorCoinFLVR သို့ BitstakeXBS0.00272 FlavorCoinFLVR သို့ PayCoinXPY0.00111 FlavorCoinFLVR သို့ ProsperCoinPRC0.008 FlavorCoinFLVR သို့ YbCoinYBC0.00000003 FlavorCoinFLVR သို့ DarkKushDANK0.0204 FlavorCoinFLVR သို့ GiveCoinGIVE0.138 FlavorCoinFLVR သို့ KoboCoinKOBO0.014 FlavorCoinFLVR သို့ DarkTokenDT0.00006 FlavorCoinFLVR သို့ CETUS CoinCETI0.184